पुरुष किन कम रुन्छन्? जान्नुहोस् कारण - Everest Dainik - News from Nepal
पुरुष किन कम रुन्छन्? जान्नुहोस् कारण
‘पुरुष महिलाभन्दा कम रुनुको पछाडि प्राकृतिक र कृत्रिम दुबै कारण जोडिएका छन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘पुरुषको संवेग आउने प्रोल्याक्टिन हर्मोन महिलाको भन्दा अत्यन्त कम हुन्छ। त्यस कारण यो शरीरको हर्मोनसँग सम्बन्धित छ।’ यसमा सांस्कृतिक कारण पनि छ। समाजले एकतर्फी रुपमा पुरुषबाट राख्ने अपेक्षाले पुरुषको संवेगात्मक आँसुलाई निरुन्ताहित गर्छ। यो जानकारी नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: boy, craing